Somali Sengi: Noole ay seynisyahannada reer galbeedku moodayeen in la waayay oo Soomaaliya laga helo - Bulsho News
Maamulka Gobalka Gedo Oo Sheegay In Diyaar U Yihiin Doorashooyinka...
Somali Sengi: Noole ay seynisyahannada reer galbeedku moodayeen in la waayay oo Soomaaliya laga helo
19 Agoosto 2020
Waa la cusbooneysiiyay 12 Nofembar 2021
Xigashada Sawirka, STEVEN HERITAGE
Xayawaankani ayaa la eg gacanta oo qofka wuxuu ku qaadi karaa gacanta
Hay’adaha ka shaqeeya ilaalinta deegaanka ayaa sannadkii la soo dhaafay ee 2020 ku tilmaamay mid cajiib u ahaa bay’ada iyo deegaanka. Xanuunka Covid-19 aawadii waxaa yaraaday wasaqowgii hawada, sidoo kalena waxaa la helay nooleyaal hore loogu maleeyay in ay dunida ka dhammaadeen.
Waxyaabaha sannadkaas la arkay waxaa ka mid ah in noolaha loo garanayo Tasmanian Devils, dib loogu celiyay dhul-waynaha Australia, Sidoo kale seynisyahannada caalamka waxay heleen nooleyaasha kala ah Somali Sengi oo Soomaalida u garanayaan Walo-Sandheer iyo Voeltzkow’s Chameleon.
Sidoo kale waxaa la xoojiyay keynta wayn ee Amazon si ay nooleyaasha kala duwan ugu wanaagsanaato nolol ahaan, looguna ilaaliyo.
Muxuu yahay (Walo-Sandheer) Somali Sengi?
Seynisyahannada reer Galbeedka ayaa sheegay in xayawaan la eg jiirka, oo ay maroodiga isku isir yihiin laga helay Jabuuti, bishii August ee sannadkii la soo dhaafay.
“Xayawaankan hadda laga hadlayo, oo afsoomaaliga magaciisa lagu yidhaahdo Walo, ama Walo Sandheer, waa xayawaan la helay sannadkii 1881-kii, nin faransiis ah ayaana kasoo qabtay bariga Soomaaliya. Waxaa laga helaa laga soo billaabo deegaannada Puntland iyo Somaliland,” ayuu yidhi Cusmaan.
Xigashada Sawirka, HOUSSEIN RAYALEH
Noolahan ayaa ku nool dhul qalalan oo dhagaxaan ah
Yuusuf Geelle oo si rasmi ah maanta isku...
Imaamka Al-Azhar oo si weyn u diiday qorshe...
Rooble: Aniga Nafteyda Qatiyaan Ayaan Taaganahay, Waxaan Taaganahay...